Bhala kwiSanta kwiKhodi yasePhanada yasePanada
Amavavolontiya aseThanada eNtshona Koloni anceda ngokuBhala kwiNkqubo yeSanta
Amavavolontiya angaphezu kwama-6,000 eCanada Post, bobabini abasebenzi kunye nabathatha umhlalaphantsi banceda i-Jolly Old Elf kunye neCanada Post yabhala kwinkqubo yeSanta. Unyaka ngamnye, abantwana abangaphezu kwezigidi ezivela kwihlabathi lonke, basebenzise inxaxheba ngokubhala kuSanta kunye nokufumana impendulo. Iincwadi ziphendulwa ngolwimi apho kubhalwe khona ileta, kubandakanya iBraille.
Izidingo zeeNcwadi kwiSanta ngeCanada Post
Yonke i-imeyile kufuneka ifake idilesi yokubuyisela ngokupheleleyo ukuze iSanta iphendule.
Qinisekisa ukuba uthumele ileta yakho ukuze ifike eSanta ngaphambi kukaDisemba 14 . Idilesi yeposi yeSanta ngu:
Akukho fowuni efunekayo ukuze kubhalwe i- Santa evela eChanada. Nangona kunjalo, ukusuka kwamanye amazwe, kuya kufuneka uyithumele ngeposi efanelekileyo yelizwe lakho ukuhambisa imvulophu eKhanada apho uSanta kunye nabancedi bakhe bayayifumana kwaye bayiphendule.
Iposi laseCanada licela abazali ukuba baqinisekise ukuba ii-letters kwiSanta azibandakanyi ukuphatha iSanta, njengama-cookies. Ukuhanjiswa okukhawuleza kweKhanada evela kwamanye amazwe, kukulungele ukusebenzisa izikhuphelo eziqhelekileyo kwaye uqinisekise ukuba ufake ifowuni efanelekileyo.
ISanta ayinayo idilesi ye-imeyile, ngokweCanada Post. Uya kufuneka umthumelele iphepha leposi.
Ukufumana impendulo evela kwiSanta
Ukuba uthumela i-imeyili yakho esuka eCanada ngasekuqaleni kweDisemba, kufuneka ufumane impendulo kwi-imeyile ngo-Disemba 14, ngokweCanada Mail. Ukuba awufumani impendulo, thumela enye incwadi ngaphambi kukaDisemba 14.
Imeyili ethunyelwe ngo-Disemba 14 kufuneka ibe nempendulo kumntwana wakho ngo-Disemba 24. Izimpendulo kwamanye amazwe zingathatha ixesha elide njengoko zixhomekeke ekuhanjisweni kweenkqubo zeposi zala mazwe.
Ukufumana Ubunono Ngencwadi Yomntwana Wakho kuSanta
USanta kunye nabancedi bakhe bayonwabile ukubona uluhlu lwabazali bakho.
Kodwa unako ukuvuselela ileta yakho ngemifanekiso, imidwebo, amahlaya amnandi kunye namabali athetha ngemidlalo eyintandokazi yomntwana, imidlalo, abahlobo, izifuyo kunye nezinye iinkcukacha. Oku kunceda ukukhanyisa i-imeyile kwaye kwenze kube lula ku-Santa kunye neendlovu zakhe ukuba enze umphendvulo oza kuwuvuyisa umntwana wakho.
Kungaba ngamava amnandi ukunceda umntwana wakho abhale ileta aze ahlole oko kukubambileyo kunye noko bakufumanisayo kunabo ubomi babo.
Ukuze iSanta ibhale iincwadi ezilungileyo, i-elves yakhe idinga ulwazi malunga nomntwana ngamnye. Ootitshala bangabhekisha kwi-Media Relations kwiCanada Post ukuze bafumane i-template kunye neenkcukacha zokuhlola ukuze basebenzise ukugqiba iphakheji yeeklasi kwiSanta. Imfuno zonyaka kunye neengcebiso zivame ukukhululwa phakathi noNovemba. Uqhagamshelwano: Ulwalamano lweMidiya 613-734-8888 okanye media@canadapost.ca.
Ukuqinisekisa ukuba abafundi bakho bafumana impendulo ngaphambi kokuba izikolo kunye ne-daycares ziphule iiholide, thumela iileta zamagumbi okufundela ngo-Disemba 8. Qaphela ukuba lo mhla ungatshintshwa unyaka unyaka, kuxhomekeke apho iiveki ziwela khona kunye neendleko zeencwadi.
I-English-German Food and Drink Uluhlu lwe-AB
Iingelosi eziphambili zeeNqununu ezine: Uriel, uMichael, uRafael, uGabriel